प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो अर्थव्यस्थामा खासै परिवर्तन हुन सकेन । नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको कुरा गरेको छ । सरकारचाहिँ ‘सुखी
जीवनका अपरिहार्य आवश्यकताहरुमध्ये पानी एक हो । पानीविना जीवनको अस्तित्व सम्भव हुँदैन । विश्वजलवायु संगठनद्वारा प्रकाशित एक तथ्यांकअनुसार सन् १९०० देखि १९५५ सम्मको अवधिमा विश्वमा पानीको प्रयोग
कृषिप्रधान देश नेपालमा उत्पादनका धेरै सम्भावनाहरु छन् । तर सम्भावना भएका कृषि उत्पादन पनि यहाँ हुन सकिरहेका छैनन् । जसका कारण अहिले नेपालले कृषि उत्पादनको आयातमै वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिर पठाइरहेको छ ।
हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म श्री स्वस्थानी माताको व्रत उपासना गर्ने पौराणिक धारणा रहिआएकोे छ । स्वस्थानी व्रत सँगसँगै नेपालीहरुको घरघरमा स्वस्थानी वाचन गर्ने परम्परा समेत रहिआएको छ ।
गरिबी मानव र विपन्न्ता मानव सभ्यताको सवैभन्दा ठूलो कलंक हो । सताव्दीका सर्वाधिक प्रीय राजनेता नेल्सन मण्डेलाले गरिबी प्राकृतिक नभै दाशता र रंगभेदजस्तै मानव व्यवहारको उपज हो र मानवीय प्रयत्नबाटै यसलाई
साक्षरताले मानवको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रष्फुटन गरेर सक्षमता ल्याउदछ । सक्षमताले पौरखी हातहरुलाई परिमार्जित र परिस्कृत गरेर हरेक व्यक्तिको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्छ । उसमा सूचना र प्रविधिको जानकारी राख्ने क्षमतामा वृद्धि हुुन्छ ।
अघिल्लो आइतबार गठन हुने भनिएको कांग्रेसको छाया सरकार गठन नभई छायामा पर्न थालेको जस्तो देखियो । पहिले यसका बारे जस्तो चर्चा भइरहेका हुन्थे यतिबेला त त्यतिसमेत भएको पाइएन । अघिल्लो हप्ता समाचार,
धरतीले भन्छिन् मसँग सबै कुरा छ मात्रै तिमीले उभ्याउन जानिदिए पुग्छ । तर ! त्यही उभ्याउन नजानेर नै समुन्नत समुद्र किनारमा बसेर हामी तिर्खाइरहेका छौँ । अञ्जुलीमा पानी उभाएर पिउने र तृष्णा मेट्ने प्रयत्न गर्दैनौं, अनि समुद्र
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ एवं सबल बनाउन लगानीले एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर लगानीको अनुकूल परिस्थिति तथा आकर्षण नभएमा पुँजी निर्माण र विभिन्न किसिमका उत्पादन वृद्धिको कार्यले निश्चित दिशा लिन सक्दैन ।
विगत लामो समयदेखि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्दो क्रममा छ । यही क्रममा सन् २०१८ मा नेपालको पर्यटा इतिहासमै सबैभन्दा धेरै संख्यामा विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आएका छन् । हुन पनि सन् २०१८ सकिन
१९९० साल माघ २ गते गएको महाभूकम्पको स्मृतिमा नेपालमा २०५५ सालदेखि हरेक वर्षको माघ २ गते भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने गरिएको छ । ‘विपत्बाट सुरक्षित हुने नागरिक अधिकार, पूरा गर्न जिम्मेवार संघ, प्रदेश र स्थानीय
वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पबाट भएको भौतिक संरचनाको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तीन वर्षको अवधि पूरा गरी चार वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
राजनीतिक पदावलीमा विश्वमै सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्द हो ‘लोकतन्त्र’ । एकातिर लोकतान्त्रिक शासनको दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ भने, अर्कातिर धेरैले उत्कृष्ट अर्थात् अब्बल मानेको लोकतन्त्रमा असमानता पनि तीव्र गतिमा बढ्दो छ ।
कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ घुमफिर वा मनोरञ्जन गर्ने उद्देश्यले पुगिन्छ भने त्यसलाई पर्यटन भनिन्छ । अर्थतन्त्रमा पर्यटन व्यवसायका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावहरु हुन्छन् । प्रत्यक्ष रुपमा पर्यटनले व्यवसायीलाई मात्र फाइदा
कसीमा ट्रेड युनियनको गरिमा
ट्रेड युनियनले कर्मचारी वा कामदारको हितलाई सुनिश्चित गर्दै रोजगारदाता वा सरकारसँग आपसी सुमधुर सम्बन्ध बनाइराख्ने उद्देश्यबाट स्थापित गरिएको हुन्छ । सामान्यतया ट्रेड युनियन कामदारहरुको स्थायी प्रकृतिको संस्था हो ।
ग्रामीण विद्युतीकरणका विविध आयाम
नेपालमा हालसम्म ७६ प्रतिशत घरघुरीहरुमा मात्र बिजुलीको पहुँच पुगेको छ । त्यसमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट ६९ प्रतिशत मात्र विद्युत् वितरण भएका छन् । ९४ प्रतिशत सहरी क्षेत्रका र ६० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रका जनतामा मात्र
सीमा, भन्सार र व्यापारका अन्तर्घातका सम्बन्ध
समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन एउटा यस्तो अवधारण हो जसमा देशको सीमा र व्यापार व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध निकायहरुसँग भिन्नभिन्न भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन र एकीकृत रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग पु-याउँछ ।
कांग्रेसमा मन मिलेको देखाउने मञ्चको खोजी
पछिल्लो समय शीर्षनेताहरुका बीचमा अपिल आइरहेको छ –हामी माथि मिल्यौं तल तपाईंहरु पनि मिल्नोहोस् । हालै सम्पन्न महासमितिको बैठकमा मन मिलेका भन्ने कुरा आए, शीर्ष नेतृत्वले यस्तो देखाउनु पनि भयो ।
मेरो मातृ संस्था नेपाल वायुसेवा निगम र यसको सुरक्षा चुनौती
मेरो रगतको हरेक रक्त कणमा यसकै कमाइले आर्जित अन्नजल परेको छ । आज म जे हुँ यसकैै कारण हुँ । यो छ र त म पनि छु । गर्व र गौरवसाथ उभिएको छु । अलिकति पनि मैले यो संस्थाको अहित सोचेँ भने मलाई पाप लाग्छ ।
तरुलमा नेपाल आत्मनिर्भर !
हाम्रो देशमा अधिकांश वस्तुमा परनिर्भरता बढिरहेका बेला मुलुक तरुलमा भने आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ । तरुलको व्यावसायिक खेती विस्तार हुँदै गएपछि मुलुक आत्मनिर्भर बन्दै गएको हो । स्वदेशी उत्पादनले माग पूरा गरेपछि न्यून